Dagaal Beleed kadhacay Gobalka Sanaag iyo Madaxweyne Muuse Biixi oo ka hadlay – Radio Daljir
Maajo 9, 2018 1:24 g 0
Dagaalka ayaa ka bilawday Deegaanka Dhidinka oo 25 KM dhinaca galbeed ka xiga Deegaanka Ceel Afweyn, waxa uuna markii dambe ku gaaray qeybo kamid ah Deegaanka Ceel Afweyn.
Dhinacyada dagaalamay waxaa kala gaaray Khasaare isugu jiro Dhimasho iyo Dhaawac, waloow aanan la sheegin tirada rasmiga ah.
Dadka Deegaanka ayaa isaga barakacay deegaanada dirirta ay ka socoto, maadaama ay ka baqdin qabaan in uu saameyn ku yeesho Dagaalo Beeleedyada halkaa ka dhacaya.
Dagaalkan labada beelood dhex maraya ayey wararku sheegayaan inuu salka ku hayo hub ay labada beelood horay u kala qabsadeen.
Maamulka Somaliland ayaa Ciidamo kala dhex gala Maleeshiyaadkaasi ka dariay Magaalada Ceerigaabo, si ay u kala dhex galaan.
Muuse Biixi Cabdi oo Wajigiisa laga dheehan karo Caro ayaa dhinacyada Maleeshiyaadka Dagaalamaya ugu baaqay in shuruud la’aan ay dagaalka Joojiyaan, waxa uuna odoyaasha labada dhinac ka dalbaday in ay waan waan deg deg ah ka dhex bilaabaan.
Qardho Xaflad sagootin ah ayaa loo sameyaay Ardayda Xaaji Cismaan (dhegayso)